Posted by စိမ်း... 20.10.09
ဟိ.. သူများဘလော့တွေမှာ အဲလိုတွေ့လို့ ကျနော်လဲ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ရေးကြည့်တာပါ။ ရူးသလိုပေါသလိုနဲ့ စာသေချာမဖတ်ပဲ လုပ်ချသွားတယ်..ဟီး
သိင်္ဂါကျော် October 20, 2009 at 4:43 AM
တို့သာယောက်ျားလေးဖြစ်ခွင့် ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကောင်မလေး ချောချောတွေ့တိုင်း ချစ်မိမှာပဲ။
လင်းဒီပ October 20, 2009 at 7:26 AM
သီချင်းလေးကို သွားနားထောင်ပြီး MTV လေးပါကြည့်ခဲ့တယ်...ခံစားပြီးဆွဲဆန့်လိုက်တာ မိုက်တယ်..မြန်မာမှုပြုထားပုံလေး..
မချစ်ရ October 20, 2009 at 7:28 AM
Tag ပို့စ်တဲ့လုပ်ချသွားတာကြည့်ဦး ဒီမှာတော့အူကြောင်ကြောင်နဲ့ဖြစ်ကျန်ရစ်ပြီ :P
kiki October 20, 2009 at 8:23 AM
ဆိုကြပါစို့..
ကျွန်တော်သာ ယောကျာင်္းတယောက် သာဆိုရင်လေ ...
စိမ်းဆိုတဲ့ငြုတ်သီးစိမ်းကို အတောင့်လိုက်ဝါးစားမယ် ။
ဂျင်းစိမ်းကို ယမ်းစိမ်း နဲ့မွှေပြီး လေစိမ်းတိုက်အောင် အသလပ်ခံပြီး လေ...စိမ်းဆီကို တစိမ်းတယောက်နဲ့ပို့ ပေးလိုက်မှာနော် ။။
တယ်လေ။။ ပြော ... ပြောလိုက် ချင်ဘူး .. ဆိုကြပါတယ် ။။ သီချင်းလား လို့.. တိန် .. တိန်.. IF .. IF...
(ဖတ်ရင်း နဲ့ဂလို ဖစ်တွားတာ .. ခွေးလွှတ်ပါ ..း)
သံလွင် HeRo October 20, 2009 at 8:32 AM
ဝက်ဝံလေး October 20, 2009 at 9:54 AM
အဲဒီ မကိကလဲ ပေါက်တတ်ကရဆို သိပ်တတ်တယ်
စိမ်းရယ် ဂျစ်(မချစ်ရ) ပြောသလိုပဲ ဝတ္ထုများလားလို့ နောက်မှ တဂ်ပို့စ်တဲ့ ဟားဟားးး တတ်လဲတတ်နိုင်ပါ့
ဒါနဲ့ မမသိင်္ဂါကျော် ပြောသလိုပဲနော် ကိုယ်သာယောက်ျားလေးဖြစ်ခဲ့ရင် မိန်းကလေးတွေ မလွယ်ဘူးမှတ် ပြီးရင်လဲ မြင်ယောင်သေးတယ် အမေတို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်လို ပြေးနေရမှာ အဟေးးးအဟေးးးး
အယ် comment တွေလဲ ဖတ်သွားသလို ပို့စ်လေးလဲ ဖတ်သွားပါတယ်လို့ နောက်ဆုံးပိတ်ပြောရင် အိမ်ဆိုတဲ့ လူပြိုဂျီး ဒါကြောင့် မိန်းမမရသေးတာ (အွန် ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူးနော်) ဟားးးဟားးးးးးး
ကိုလူထွေး October 20, 2009 at 11:26 AM
ကျားနဲ့မ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ခွဲထားတဲ့နေရာမှာ အပေါက်မှားဝင်မိလို့ ပြဿနာတွေ တက်နေဦးမယ်နော်...
ဆိုကြပါဆို့ဆိုလို့ရုံလေးလည်း
သတိထားနော် ဖွားကိ ကအေစိမ်းလိုက်တောင်
စားချင်နေသတဲ့ တော်ကြာ အဟီ ပြေားတော့ဖူး
Angel Shaper October 20, 2009 at 4:01 PM
၀တ္ထုလေး ကောင်းထှာလို့ ဖတ်လိုက်တာ တက်ဂ်ပိုစ့်ဆိုပါလားးးး ဆလံပေးပါတယ် မစိမ်းရေ...
အနော် October 20, 2009 at 8:50 PM
စိမ်းက အနော့်ကို လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ့်သူဆိုတာ ကျိန်းသေနေလို့လေ ဟီးဟီး
လေနဲ့ ဘောလုံးကန်ကြမယ်ကွာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဒီနှစ် တို့မြန်မာတွေ ချိန်နေတဲ့အကြောင်း ဝမ်းသာအားရဆွေးနွေးကြမယ် ဟဲဟဲ
ပီးရင် စိမ်းကျွေးမယ့် လက်ဖက်ရည်နဲ့ မလိုင်နံပြားကိုကြိတ်ပီး လက်တွေ့သာ တကယ်ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ စိတ်ကူးယဉ်ရင်း အိမ်ပြန်မယ် ခွိခွိ
ဒါ့ထက် ဆိုကြပါစို့ အနော်သာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်ရင်တော့ ကောင်မလေးတွေကို အကုန်ရှိတ်ပစ်မယ် အခုတောင် မနည်းလျှော့ထားရတာ ခွိခွိ
အမရာ October 21, 2009 at 3:31 AM
စည်သူ October 21, 2009 at 7:17 AM
စည်သူ October 21, 2009 at 7:25 AM
အောင်မလေး အောင်မလေး အောင်မလေး
အော်လိုက်ပုံများ.. ရေချိုးခန်းကြီးတောင် ကွဲထွက်တော့မယ်ဟ..း)
သားကြီး October 23, 2009 at 12:57 AM
မထင်ရင် မထင်သလိုဆိုင်ထဲကလူများကိုလည်းပြဿနာရှာကြမည် :P
သားကြီး October 23, 2009 at 12:59 AM
“အိပ်မက်အကြီးကြီးစိုက်လို့ ယုံကြည်ချက်တွေလောင်းလောင်းပြီး ပျိုးခဲ့သမျှ တလွဲပွင့်တွေချည်း ပွင့်နေတဲ့ ကန္တာရစိမ်းပင်တစ်မျိုး”
jr.lwinoo October 23, 2009 at 8:47 AM
အဲလို တခါမှ မစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ တကယ်။
T T Sweet October 23, 2009 at 3:42 PM
အော် ... ယောက်ကျားလေးအတွေးနဲ့ ရေးတတ်လိုက်တာ။ဂယ်ယောက်ကျားလေးကျနေတာပဲ။ ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေတောင် သတိရသွားတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကလူကြီး မပြောရဘူးနော်။
Maribel Artaste August 1, 2012 at 8:51 AM